Izindawo zokuhlala e-Hamarøy - I-Airbnb
Izindawo zokuhlala e-Hamarøy
Hamarøy, Nordland, i-Norway
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Jannita
U-Jannita Ungumbungazi ovelele
I-Ulvsvåg itholakala maphakathi nomasipala wase-Hamarøy futhi iyisiqalo esihle sokuqwala izintaba nokunye okuhlangenwe nakho kwemvelo. Ifulethi elingaphansi litholakala eduze kwe-E6, ukuhamba imizuzu embalwa ukusuka egalaji likaphethiloli, ikhefi / indawo yokudlela kanye ne-pub, isitolo segrosa nesitobhi sebhasi.
Uzothola okudingayo efulethini, ngaphandle kwekhishi ukupheka ukudla okushisayo. Nokho, kukhona ikhishi elilula lapho unefriji, iketela, izinkomishi namabhavu. Kukhona ne-inthanethi engenawaya kanye ne-TV.
Kuleli fulethi kunegumbi lokulala elilodwa elinendlu yomndeni kanti egumbini lokuhlala kunosofa ogoqeka kalula ube ngumbhede wabantu ababili.
I-Hamarøy yaziwa njengesango eliya e-Lofoten, kodwa lapha ungajabulela imvelo ebabazekayo namathuba angapheli empilweni yangaphandle - ngaphandle kwenani elifanayo labavakashi!
Lapha kukhona ukusondelana ngokushesha nolwandle nezintaba zokudoba nokuqwala izintaba, abaningi nabo beza lapha ukuzogwedla noma ukukhuphuka. Umasipala ucebile futhi ngamasiko - phakathi kwezinye izinto, i-Hamsun Center, i-Árran Lule Sámi Center kanye nedolobhana lobuciko namasiko iTranøy izindawo ezinhle.
Uhambo olulula oluya ogwini olubasa umlilo ngobusuku behlobo nalo lunqoba izinto eziningi, futhi e-Hamarøy kunenqwaba yezindawo ezinjalo ongakhetha kuzo.
I-Ulvsvåg iphakathi kwakho konke lokhu futhi iyisiqalo esihle kakhulu salabo abafuna ukuzwa i-Hamarøy. Le ndawo iyihabhu kumasipala, etholakala eduze kwe-E6 futhi ephumela ngaphandle e-Hamarøy.
Umnikazi wendawo uhlala esitezi sesibili saleli khaya futhi uyatholakala ukuze abuze imibuzo, futhi unolwazi namathiphu mayelana nokuthi yini okufanele uyenze endaweni.
UJannita Ungumbungazi ovelele